Fiatrehana ny valanaretina: miverina an-doharano tsy fidiny ny «sasany» | NewsMada
Fiatrehana ny valanaretina: miverina an-doharano tsy fidiny ny «sasany»
Mikoropaka… Raikitra ny « adigasy » !…. Raha tsy sendra na tojo zava-tsarotra tahaka izao ve ny Malagasy vao hahatsapa fa manana ny maha izy azy ange izy ? Iray amin’ireny ny tontolon’ny fitsaboana.
Ifandrombahana ny romba, ny kininimpotsy, ny mandravasarotra, sns. Fa naninona hatramin’izay no nomena anara-maneso sy mampihorohoro ireo mampiasa azy ireny ? Lazaina fa « mpikiky », « mpilalao ody », sns. Misy aza moa ireo sahy milaza fa « mpamosavy » ny mampiasa tapakazo !
Tsy fantatry ny « sasany », angamba, fa aman-taoniny maro ny voanenina (raviny, fakany, tahony) alain’ny vahiny eto Madagasikara ahodina ho tonga « fanafody vazaha ». Tsy io zavamaniry io ihany fa maro. Anisan’ireny ny talapetraka, ny rotra, ny dingandingana, ny ravintsara…
Tsy tokony hiandry dona…
Zary raikitampisaka amin’ny Malagasy io toetra io. Raha tsy misy zavatra mandona azy mafy, tsy mitodika any an-doharano izy. Efa ela ny Malagasy no nahafantatra sy nahalala tsara an’Andriamanitra Andriananahary. Tsy tokony ho zava-baovao aminy ny mivavaka, saingy toa hadinodinony izany raha tsy tonga amin’ny andro sarotra tahaka izao izy.
… Raha mbola ao amin’ny Malagasy ny « fanahy no maha olona », tsy tokony hiandry dona mafy tahaka ny zava-misy ankehitriny vao hitodika sy hiverina an-doharano. Tsy tokony hofehezina amina lalàna vao tsy hanararaotra ny fahasahiranan’ny hafa. Raha tao anatin’izay andro vitsivitsy nahafantarana fa tafiditra eto Madagasikara izay no jerena, toa « tsy fidiny » ihany no iverenan’ny sasany an-doharano ka nasahian’izy ireo hividy romba sy ravintsara ary kininimpotsy !